Interview – MeroUrlabari.Com
‘मेरो क्षेत्रलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउँछु’
डिगबहादुर लिम्बु,कांग्रेस उम्मेदवार, प्रतिनिधिसभा सदस्य मोरङ क्षेत्र नं. १ चुनावको मिति नजिकिँदै छ, कस्तो छ तयारी ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । यसबीचमा प्रचार समिति गठन गर्ने, विभिन्न ठाउँहरुमा कार्यालय विस्तार गर्ने, टोल भेला गर्ने, कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, मतदाताको बीचमा पुगेर मत माग्ने लगायतका प्रकृयामा हामी अघि बढिसकेका…
बाम एकतालाई अब कसैले रोक्न सक्दैनः शुशिल
गणेश उप्रेती ‘सुशील’ नेकपा माओबादी केन्द्र मोरङका एक जुझारु, गतिशिल युवा नेता हुन् । ०५३ सालदेखि क्रान्तिकारी बिद्यार्थी हुँदै वामपन्थी राजनीतिमा हाम फालेका उप्रेती ०५६ सालमा जेल परेका थिए । इलाम, विराटनगर, राजविराजको जेलमा दुई बर्ष यातना भोगेका उनी पार्टीमा सुशिल नामले चिनिन्छन् । विभिन्न समयमा गरी दुई पटक मोरङको माओबादी आन्दोलनको नेतृत्व सम्हालिसकेका उनी…
वाइजोन इन्टरनेट हरेक बस्ती र घरमा पुर्याउँदैछौं–श्रेष्ठ
२१ औं शताब्दीसँगै जमाना सूचना प्रविधिको । सूचना प्रविधिमा आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । के शहर, के गाउँ, मानिसहरू सूचना प्रविधिमा मस्त छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगले विश्वलाई नै खुम्च्याएको छ । साथै यसले रोजगारीमासमेत आयाम ल्याएको छ । यसअघि रोजगारीकालागि युवाहरू विदेसिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, यतिबेला सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट स्वदेशमै आम्दानीको गतिलो उदाहरण…
स्वस्तिक छापहरूलाई मूल्यांकन गर्दा अन्तरघात भएको पूर्णरूपले पुष्टि हुन्छ:अधिकारी
ललित अधिकारी, पूर्वी उत्तर मोरङका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । मोरङ जिल्लाको साविक जाँते गाविस वडा नं. ३ नामसालिङमा पिता डिल्लीबहादुर र माता हरिलक्ष्मी अधिकारीको कोखबाट २०२३ सालमा जन्मनुभएका उहाँ विद्यार्थी कालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । हाल उर्लाबारी वडा नं. ५ को स्थायी बासिन्दा रहनुभएका अधिकारी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि औपचारिक रूपमा कांग्रेसमा…
‘उपाधि जितेर होइन, काम गरेर ठूलो बन्न सकिन्छ’
निरुमा थापा मिस टिन उर्लाबारीकी विजेता हुन् । मोरङको उर्लाबारी–७ की १८ बर्षीया यी सुन्दरी नेपाल दर्शन कजेल कक्षा १२ मा अध्ययरत छिन् । गायनमा विशेष रुची राख्ने उनी भबिष्यमा मोडलिङसँगै गायनमा स्थापित हुने सोचाईमा छिन् । ५ फिट ४ इन्च अग्ली निरुमासँग गरिएका पाँच प्रश्न ः मिस टिन उर्लाबारीको ताज जित्दा कस्तो महशुस गर्नु…
‘राज्यले दिएको सेवा सुविधा लिन जनताले कसैलाई घुस दिनु पर्दैन’
प्रस्तुति : – सरोज बस्नेत पूर्वी मोरङको केन्द्रका रुपमा स्थापित उर्लाबारी नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसतर्फका उम्मेद्वार खड्गबहादुर फागु अत्याधिक मतका साथ विजयी भए । एमालेको गढका रुपमा मानिएको उर्लाबारीमा कांग्रेसले ऐतिहासिक सफलता हात पार्ने क्रममा फागुले ११ हजार ६ सय ३२ मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित भए । उनले ३ हजार ९० मत अन्तरले एमाले उम्मेदवार भूपालसिं…
म अझै पनि कुमारी नै छु : कोमल ओली
हाम्रो परिवार पुख्र्यौली थलो रोल्पाबाट दाङको टिकरी झरेको हो । वैशाख १ गते म त्यहीँ जन्मिएँ । टिकरी विकट गाउँ थियो, स्कुल जान नै दुई/तीन घन्टा हिँड्नुपर्थ्यो । त्यसैले बुबाले हामीलाई स्कुल जान घोडा किनिदिनुभएको थियो । दाइ र म त्यही घोडा चढेर स्कुल जान्थ्यौँ । पछि टिकरीको सम्पत्ति पनि बेचेर हामी स्कुलनजिकै भएको दाङकै…
‘नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम ब्यक्ति छनौट गरी मतदान गर्नुहोस्’
लोकनाथ पौडेल उर्लाबारी वडा नं. ५ बाट वडाध्यक्षमा उठ्दै छन् । नेकपा माओबादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका पौडेल निष्पक्ष र सत्यका पक्षमा वकालत गर्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उर्लाबारी वडा नं. ५ लाई समृद्ध र नमूना बनाउने अटोठका साथ जनताका घरदैलोमा पुगिरहेका पौडलसँग चुनाबी बिषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीः लोकनाथ पौडेल उर्लाबारी वडा नं. ५…
‘सबैले आफ्नो अमूल्य मत दिनुहुन्छ, त्यसैले म चुनाव जित्छु’
उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ५ मा परिचित नाम हो, चन्द्र भट्टराई । २०३८ सालमा अनेरास्ववियू प्राग सचिवबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका भट्टराई रोजगारीको शिलशिलामा झण्डै १० वर्ष दक्षिण कोरियामा बसेका थिए । त्यहाँ बसेपनि मातृभूमिको सेवामा निरन्तर लाग्दै आएका भट्टराई यतिबेला दक्षिण कोरियामा सिकेको सीपलाई वडामा ढाल्ने सोचमा छन् । प्रस्तुत छ, उनै भट्टराईसँग गरिएको…
‘मतदाताहरुको साथ र सहयोग नै मेरो जीतको आधार हो’
भानुभक्त शर्मा पराजुली, उर्लाबारी– ५ मा परिचित नाम हो । पराजुलीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ५ बाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । बुवा चिदानन्द पराजुलीको प्रेरणाले कांग्रेस राजनीतिमा होमिएका पराजुली २०३६ सालमा विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । करिब साढे तीन दशक लामो राजनीतिक आरोहणका क्रममा पराजुलीले…